Xeerka Kufsiga oo looga Dooday Garowe – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2015 5:25 b 0
Talaado, Oktoobar 06, 2015 (Daljir) —Wasaaradda cadaalada iyo arrimaha diinta dowladda Puntland ayaa maanta qabatay wada tashi hal maalin ah oo ku saabsan xeerka lagu ciqaabayo dadka gala dambiyada kufsiga ama galmada sharci darrada ah.
Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa furitaanka wadatashigaan ka sheegay xeerkaan haddii uu meel maro inuu ku kalsoon yahay inuu yarayndoono dhibaatooyinka kufsiga loo gaysto haweenka.
Wasiir ku xigeenka cadaalada Puntland Maxamed Faarax oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay xeerkaan inuu gabagabo ku dhowyahay islamarkaana loo baahan yahay in laga saaro wax walba oo carqalad ku keeni kara marka la horgeeyo golayaasha dowladda.
Waa markii ugu horeysay oo xeerkaan ku saabsan xakamaynta kufsiga ay soo saarto wasaaradda cadaalada Puntland, Wuxuuna kusoo beegmayaa iyadoo aan Puntlnd horey uga jirin xeerkaan.
CPJ oo ka Hadashay Xarig-ga wariyayaal ka tirsana Tv-ga Universal